Ikhosi ye-CSI ETABS-Uyilo loLwakhiwo-Ikhosi yeNgcali- iGeofumadas
Ikhaya/Izifundo ze-AulaGEO/Ikhosi ye-CSI ETABS-Uyilo loLwakhiwo-Ikhosi yeNgcali
Le yikhosi equka inkqubela phambili yethiyori kunye nokusebenza kweZakhiwo zeNdonga zoKwakha. Yonke into enxulumene nemimiselo iya kucaciswa ngokweenkcukacha: Imigaqo yoYilo kunye noKwakhiwa kweZakhiwo zoKwakha iMasonry R-027.
Kule nto, iziganeko ezinje ngefuthe lekholamu emfutshane ziya kucaciswa, ezisetyenziswa kwiDonga leMasonry kwaye kufuneka ziphathwe ngononophelo olukhulu kwiiprojekthi.
Ukongeza kwiindlela ezimbini zokwabela iindawo zentsimbi kwesona software sihambele phambili kwintengiso kwi-ETABS 17.0.1 Ukubalwa kwesakhiwo, apho iziphumo zesoftware ziya kuqinisekiswa ngesandla.
Lungiselela iprojekthi yokwakha eyakhiweyo (yonke inkqubo)
Ikhosi ye-Masonry yoLwakhiwo kunye ne-ETABS-iModyuli yesi-7